Ahlu Sunadda Gedo oo qaadacday Shir ka dhacay Nairobi Shaaficiyah.com � Arts-Osmanart
Ahlu Sunadda Gedo oo qaadacday Shir ka dhacay Nairobi Mid ka mid ah dhinacyadii ka qeyb galay Shirkii Nairobi ee Maamul u sameynta gobolada jubooyinka iyo Gedo oo qaadacay Shirkaasi.
Afhayeenka Maamulka Ahlu Sunna Waljamaaca ee gobolka Gedo Sheekh Maxed Xuseen ayaa waxa uu sheegay in uu fashil ku dhamaaday Shir uu sheegay in la doonayay in Maamul aysan Umada raali ah ka aheyn loogu sameeyo gobolada Jubooyinka iyo Gedo oo ka dhacay magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Sheekh Maxed ayaa waxa uu sheegay in Shirkaasi ka Ahlu Sunna ahaan ay ka qeyb galeen hase ahaatee waxa uu sheegay in ay isaga baxeen markii ay ogaadeen ajandaha Shirka oo uu tilmaamay in wax dan ah aysan ugu jirin Umada Soomaaliyeed laguna sameynayo Maamul aysan raali ka aheyn shacabka oo dabada ay riixayaan dano shisheeye.
Afhayeenka ayaa waxa uu xusay in diidmada waxii kasoo baxay Shirka Nairobi ee u dhaxeeyay Ahlu Sunna, dowladda, Raaskambooni iyo Maamulka Azaaniya ay ka mideysan yihiin dad badan oo ay ka mid yihiin Masuuliyiinta Maamulka dowladda ee gobolka Gedo oo uu madax u yahay Maxed Cabdi Kaliil sidaasi awgeedna waxa uu sheegay in wax quseeya uusan ahayn heshiiska la shaaciyay in la wada gaaray.
Maamulka Azaaniya oo uu madax ka yahay Pro Gaandi oo leh mucaarad badan ayaa waxa uu dadaal xooggan ugu jiraa sidii uu ku hano lahaa Maamulida gobolada Jubooyinka iyo Gedo.